Soosaarayaasha iyo Alaab-qeybiyeyaasha - Warshadda Shiinaha ee Collagen
Gelatin Hydrolyzed sidoo kale loo yaqaan 'hydrolyzed collagen' waa borotiin isku dhafan iyo cunsur muhiim u ah nafaqada caafimaad leh.Quruxdooda nafaqada iyo jir ahaaneedba waxay sare u qaadaan lafaha iyo kala-goysyada caafimaadka qaba waxayna dadka ka caawiyaan inay yeeshaan maqaar qurux badan.
Kolajiin biyo leh waa nooc ka mid ah wax soo saarka bayoolojiga dabiiciga ah, kaas oo hodan ku ah dhammaan noocyada walxaha bioactive ee lagama maarmaanka u ah dheef-shiid kiimikaadka aadanaha.Waxaa lagu sifeeyey maqaarka xoolaha cusub. Waxay leedahay astaamo badan. Sida dusha sare, haynta biyaha, isku dhejinta, sameynta filimka, emulsibility iwm.
Peptide kalluunka waxaa laga sameeyaa kalluunka badda ku jira oo cusub, oo hodan ku ah amino acids iyo waxyaabo kale oo raadraac ah, faa iido badanna u leh caafimaadka aadanaha.
Kalluunka collagen waxaa laga soo saaraa kalluunka badda. Waa wasakh la'aan-dhadhan fiican, oo saamaynteeda ayaa ka sii muuqata.
Koofiyadaha 'Collagen' waxay kakooban tahay 95% maadada borotiinka waxaana loo tixgeliyaa inay tahay nooc cusub oo nafaqada sare leh ee nafaqada leh
Collagen cabitaan adag waa nooc nafaqo leh qiime nafaqo oo sarreeya, cagaar iyo daryeel caafimaad.
Baarka nafaqada ee Collagen–Nourising, haboon oo cilmi ku dhisan.
Waxyaabaha la isku qurxiyo ee loo yaqaan 'Collagen' waxay u oggolaanaysaa maqaarku inuu kala baxo oo laabmo, iyo waa ayaa mas'uul ka ah dayactirka iyo taageerida ah dabacsanaanta maqaarka.
Collagen waxay kakooban tahay 95% maadada borotiinka, waxaana loo arkaa inay tahay nooc cusub oo nafaqada sare ee nafaqada leh. Waa furaha lagu hayo maqaarka dhalinyarada wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa ilaalinta maqaarka jirka.
Kolajiin bovine waxaa lagu farsameeyaa xaaladaha alkaliinka, ka dibna laga soo saaraa biyo kulul oo la sifeeyaa, la weynaadaa oo la qalajiyaa tallaabo tallaabo tallaabo ah si loo soo saaro wax soo saar nafaqo leh.